Lozam-pifamoivoizana :: Lehilahy iray namoy ny ainy, olona efatra naratra voadonan'ny fiara • AoRaha
Lozam-pifamoivoizana Lehilahy iray namoy ny ainy, olona efatra naratra voadonan’ny fiara
Maty tsy tra-drano ny lehilahy iray, dimy amby roapolo taona, voadonan’ny fiara tetsy Ankazomanga, omaly maraina. Olona efatra hafa naratra. Efa voatazona eny amin’ny polisy ny mpamily nitondra ny fiara nanao loza.
«Nirimorimo nandeha mafy avy any ilay fiara tsy mataho-dalana. Nanidina mihitsy izy rehefa nandalo teo amin’ny dongona fampihenana ny hafainganam-pandeha. Nandona olona sy nifatratra teo an-tsisin’arabe, avy eo», hoy ny olona milaza ho nahita ny fisehon’ny loza.
Nandona fiara iray marika « Peugeot 306 » nijanona teo an-tsisin-dalana io fiara tsy mataho-dalana io. Voadonany ihany koa ny olona telo nandeha an-tongotra teo akaiky teo. Namoy ny ainy teo no ho eo ny tovolahy iray, izay mipetraka eny amin’ny manodidina ihany. Naratra ny lehilahy iray, roa amby dimampolo taona sy vehivavy, roapolo taona.
«Nizotra ho any Andraharo ity fiara nanao loza. Niezaka niala bisikileta iray teo alohany izy kanjo tavafoaka ny arabe. Ankoatra ny fiara sy ireo mpandeha an-tongotra voadona dia naratra ihany koa ilay mpitondra bisikileta teo alohany sy mpitondra môtô iray nanaraka azy tao aoriana», araka ny fanampim-panazavana avy amin’ny polisy.
Nitangorona ny olona. Nivoaka avy tao anaty fiara ary nafenina tao amina fivarotana iray teo akaiky teo ny mpamily, teo am-piandrasana ny mpitandro filaminana. Ny polisy ao amin’ny Borigady misahana ny lozam-pifamoivoizana (BAC), etsy Tsaralalàna, no misahana ny fanadihadiana. Nalain’ny fiara avy amin’ny Birao misahana ny fahadiovana (Bmh) ny razana. Naterina eny amin’ny hopitaly ireo maratra.
Fianjerana tamin’ny fiaramanidina :: Hita ny karandohan’ilay tovovavy anglisy 20 taona
Fanafihana sinoa :: Nodimandry ilay lehiben’ny Zandarimaria voatifitra